I-Gooseneck Kitchen Faucet Chrome
Ikhaya / Ikhishi Faucets / Donsela Phansi Oompompi Bekhishi / WOWOW Gooseneck Ikhishi ompompi Chrome
I-WOWOW Gooseneck Kitchen Faucet Chrome
Kulinganiselwe ngo- 5.00 Ngaphandle kwe-5 okusekelwe 4 izilinganiso ikhasimende
(4 Izibuyekezo ikhasimende)
Lapho ompompi bexube ekhishini bekhipha isifutho se-switcher, cindezela ifindo ukuvala umthombo wamanzi okokuqala.
Isihlungi se-foam senza ukuthambisa kwamanzi kuthambe, kube ngaphezulu kwamanzi futhi kusebenza kahle.
2311701C imiyalo yokufaka
Le mixer yasekhishini ithepha ku-2311701C ngaphandle kwe-sprayer kwenziwa nge-cast cast yethusi efanelekile kanye nokuwasha okuhola. I-SUS304 inemvelo futhi inempilo. Impilo yethu incike kubanakekeli bethu. Ingashintshwa ngokujikeleza okushisayo nokubandayo, okulula ukukungena esikhundleni, okulula ukukufaka, okuyisisekelo nokunhle, futhi kufanelekile ukuhlobisa okuhlukahlukene nokuhlobisa kwekhishi.
Donsa ngendlela othanda ngayo, elula kakhulu yokuxubha nokugeza izitsha, ukuphuma kwamanzi okusebenzayo, amanzi okugeza / isikebhe kungashintshwa kuthando, insimbi ye-valve shaft, umgogodla oqinile oqinile futhi oqinile
Ukufakwa komkhiqizo kufaka: isikulufu, i-hose, isando sesisindo, isisekelo, amathuluzi wokufaka
SKU: 2311701C Categories: Ikhishi Faucets, Donsela Phansi Oompompi Bekhishi Tags: 1 Imbobo, Chrome, isifutho
60 x 30 x 7.5 cm; 2.94 Amakhilogremu
Engikuthanda kakhulu ngale ompompi ukuthi kulula ukuyifaka futhi kubukeka kukuhle. Ngishintshe i-Moen yami ngalokhu. Ngishaywa umoya yikhwalithi yale mpompi ngoba empeleni inentengo yokuncintisana. Ngifisa sengathi ngabe ngiyithengile ngokushesha, kepha bengilokhu ngiyidlulisa ngoba benginovalo lokuthi njengoba intengo iphansi kakhulu izobe ingenampilo.
Ngikholwa ukuthi ngiyifake emuva kodwa isabukeka yinhle futhi iyasebenza
ngakho-ke angiqaqambi lutho ukuze nje ngikuguqule
Ngizobuyekeza ezinyangeni ezimbalwa ukukwazisa ukuthi kusebenza kanjani kuze kube manje kusebenza njengokukhangisiwe
Ikhwalithi enhle, ompompi osindayo. Ngibe nakho ngaphezulu kuka-6 mos manje; okuwukuphela kwendaba esinayo ukuthi lapho isibambo sibheke phezulu amanzi azovuleka ngokwawo! Sidinga ukuba nayo “endaweni eshisayo yamanzi” ngaso sonke isikhathi ukuvimbela amanzi ukuthi azigijimele wona.
Ifike ngokushesha, bekulula ukuyifaka futhi isebenza ngokumangalisayo!